Jiangyin Meiyuan Industrial Co, Ltd. yakavambwa muna 1988, yakave yakazvipira kune iyo HVAC / firiji yakasarudzika tepi, yepamusoro mhando inoumbwa kuputira veneer, mativi-maviri mativi anoratidzira kuputira aruminiyamu foil, maviri-mativi matipi, kumanikidza inonamatira kunamatira kutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa uye kutengesa. Iyo kambani iri munzvimbo yekumusoro yeYangtze Rwizi Delta, inzvimbo ine hupfumi zvakanyanya muChina. Iri padyo neRwizi rweYangtze kuchamhembe neShanghai kumaodzanyemba, nekutakura kuri nyore.
Meiyuan inonamira tepi inovhara matatu akateedzana e-solvent - yakavakirwa acrylic yekunamatira, emulsion - yakavakirwa acrylic yekunamatira uye yekugadzira yerabha inonamira. Iyo yepasi zvinhu zvealuminium pepa tepi yakachena aruminiyamu foil, PET inoumbwa nealuminium pepa, girazi fiber inosanganiswa aluminium foil, yakasimbiswa aluminium foil veneer, rakarukwa rinoumbwa veneer uye zvichingodaro, izvo zvinogona kusangana nezvinodiwa zvekushandisa zvemamiriro ekunze akasiyana siyana, akasiyana matunhu uye akasiyana tembiricha yekushandisa.
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mukuchengetedza kupisa, kupisa kupisa, firiji, midziyo yemumba, zvemagetsi, kugadzira mota, kuvaka ngarava, simba remagetsi, kuvaka, kupakata kwemaindasitiri uye mamwe maindasitiri.
Mushure memakore ekuunganidza uye kusimudzira, kambani yakagadza nyika yekutengesa network. Iyo kambani yave imwe yemabhizinesi anozivikanwa muiyi tepi indasitiri muChina, uye mari yegore yekutengesa iri kuramba ichikura zvakatsiga. Panyaya yekutengesa mhiri kwemakungwa, zvigadzirwa zvekambani zvakatumirwa kuNorth America, Europe, South America, Southeast Asia nedzimwe nzvimbo, vanofarira mukurumbira wakanaka.
Iyo kambani inodyara mari zhinji gore rega kuti ienderere mberi nehunyanzvi hwekuvandudza uye nyowani chigadzirwa kugadzirwa, kuti irambe ichivandudza uye budiriro yekusangana nemusika uye zvekudyidzana kudiwa. Iyo kambani yakashongedzerwa neakateedzana e otomatiki ekugadzira michina, yekumberi yekutsvagisa uye yekuvandudza michina uye mhando yekuyedza michina, kuunzwa kwenhamba huru yeakanakisa ekutsvagisa nekusimudzira vashandi, mukuomerera maererano neiyo ISO9001 yenyika dzese mhando manejimendi manejimendi system system, kuona kuti zvigadzirwa zvinosangana nenyika dzese.
Makambani anonamatira kune "zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mitengo inosarudzika, vatengi vanogutsikana" bhizinesi uzivi, vanogamuchira nemoyo wese vatengi kumba nekune dzimwe nyika kuti vashande pamwe chete mukuvandudza pamwe, kugadzira ramangwana riri nani.
Yakapetwa-Yakatsigirwa Yakasimbiswa Aluminium Foil Kutarisana, Iyo Inopisa Sei Inogona Aluminium Foil Tepi Tora, Tepi, Intertape Polymer Boka Aluminium Foil Tepi, Aluminium Foil Girazi Yejira Tepi, Imwe-yakatsigira Aluminium Foil Kutarisana,